Ho Fitsinjovana ny Ampitso, Namadika Ny Horonam-peo Kasety Ho Nomerika ny Firenena Voalohany ao Canada · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 11 Mey 2017 4:50 GMT
Vakio amin'ny teny Español, Ελληνικά, 日本語, Français, Italiano, English, عربي, English
Tsy vahaolana maharitra intsony ny fandraketana ny rakipeo amin'ny horonam-peo kasety na dia mbola tsy tena lany andro aza izany. Maro ireo vondrom-piarahamonina ao amin'ny Firenena Voalohany manerana an'i Kolombia Britanika, Kanada, no mbola manana horonam-peo kasety an-jatony mirakitra ireo tantara fahiny aman'ora maromaro, hira nentin-drazana, sy ireo firaketana manan-danja mikasika ny kolontsain'izy ireo. Noho io fiovana io efa lasa lavitry ny teknolojia tsy nomerika, dia manahy izy ireo fa maro amin'ireo fahalalana ireo no mety ho very raha tsy nisy ny paikady hamindrana ny votoatiny ho amin'ny endrika nomerika.
Nirotsaka an-tsehatra mba hanome famatsiana ara-bola sy hampiofanana ireo vondrom-piarahamonin'ny Firenena Voalohany ny tetikasa antsoina hoe Indigitization amin'ny famadihana ho nomerika ireo rakipeo ireo mba ho fomba iray hiarovana izany ho an'ny taranaka hoavy. Namorona torolàlana an-tserasera amin'ny antsakany sy andavany ho an'ireo vondrom-piarahamonina liana amin'ny dingana fanovana ho nomerika ity tetikasa fiaraha-miasa eo amin'ny Foibe Fampiofanana Irving K. Barber, ilay Filan-kevitry ny Teknolojia ao amin'ny Firenena Voalohany, sy ireo vondrom-piarahamonina telo ao amin'ny Firenena Voalohany- Heiltsuk, Ktunaxa ary ‘Namgis ity.
Anisan'ny voarakitra ao amin'ny fizaran'ny torolàlana ny fanovana ho nomerika amin'ny fomba tsara indrindra sy manaraka ny fitsipika, ny toromarika amin'ny fanatevenana ny lahatahiry, sy ny toro-hevitra hafa mikasika ny fanovana ho nomerika ny sary sy ny sarintany .
Afaka mividy fitaovana ho an'ny ekipa ara-teknika amin'ny fanovana ho nomerika sy mivezivezy mankany amin'ny fiofanana amin'ny alàlan'ity fanomezana famatsiam-bola ity ireo Firenena Voalohany, ny Metisy ary ny vondrom-piarahamonina Inuit . Efa tontosa ny famatsiam-bola amin'ny fihodinana fahadimy ary efa nifarana vao haingana tamin'ny volana Martsa 2017 ny fiantsoana fahaenina amin'ny tolo-kevitra. Ohatra amin'ireo tetikasa izay mahazo vola avy amin'ny Fandaharan'asa Famatsiam-bola Indigitization ireto manaraka ireto:
ny governemanta nasionaly Tsilhqot'in tamin'ny fanovana ho nomerika ireo horonam-peo kasety mirakitra ireo antsafan'ny Zokiolona Tsilhqot'in tamin'ny taona 1999-2000 izay tombanana ho kasety miisa 400. Amin'ny teny Tsilhqot'in/Chilcotin ireo antsafa niarahana tamin'ny zokiolona ireo kanefa mampalahelo fa efa tsy miaraka amintsika intsony ny sasany amin'izy ireo amin'izao fotoana izao “
ny Firenena Voalohany Hupacasath tamin'ny fanovana ho nomerika ny “horonam-peo kasety miisa 83 mirakitra ireo tantara maharitra 240 ora mahery izay notantaran'ireo zokiolona. Ahitana antsafa niarahana tamin'ireo zokiolona momba ny fampiasana ny tany ny horonam-peo, ary ny tantara anganon'ny Hupacasath nanavatsava ny taranaka fara aman-dimby. “
Raha hanampy ireo vondrom-piarahamonina mba hiarovana ireo firaketana ireo ity fanovana ho nomerika ity, dia tsy voatery midika akory izany fa ho alefa any amin'ny aterineto izy ity hidiran'ny besinimaro. Anisan'ny hita ao amin'ny torolàlana ny fanomezana fanazavana momba ny zon'ny mpamorona, ny fizakàmanana ara-tsaina, sy ny fahazoan-dalana samihafa karazana tokony hojerena, kanefa manazava izany tsara ny tetikasa Indigitization fa ” miankina tanteraka amin'ny Firenena Voalohany tsirairay avy ny fanapahan-kevitra momba ny fidiran'ny daholobe mikasika ny fanovana ho nomerika.”
Nikarakara fihaonambe natao “Hifanakalozan-kevitra momba ny Hoavy” ihany koa ny tetikasa tamin'ny volana Jona 2016, izay “nihaonan'ny tambajotra vao misondrotra ao amin'ny vondrom-piarahamonina matihanina amin'ny loharanom-baovao sy ireo manana traikefa, ireo manam-pahaizana, ary ireo vondrom-piarahamonina manam-pahaizana manokana midadasika kokoa izay miasa amin'ny fanohanana ny fikirakirana loharanom-baovao marina miaraka amin'ireo vondrom-piarahamonina tompotany. ” Hita ao amin'ny Tantara avy amin'ny fizarana Fifanakalozan-kevitra ny famintinana ny fandaharana sy ny fandraisam-pitenenana.